Wararkii Ugu Dambeeyay COVID-19 Iyo Tirada Kiisaska Cudurka Oo Gaadhay 60 Million Oo Qof – Borama News Network
Wararkii Ugu Dambeeyay COVID-19 Iyo Tirada Kiisaska Cudurka Oo Gaadhay 60 Million Oo Qof
Jaamacadda fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa diiwaan gelisay 60,186,902 kiisas oo ah safmarka corona ah iyadoo 1,417,319 oo qofna u dhinteen xanuunka kolkii hore ka soo unkamay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December, ee sanadkii hore.
Dalka Mareykanka ayaa wali ah halka uu safmarka sida ba’an u dhibaateeyay, in ka badan 261,000 oo ruux ayaa u geeriyootay halka 12.7 million oo kiis laga diiwaan geliyay, waxaa ku xiga dalka India 9.2 million oo kiis ayuu marayaa safmarka corona, Brazil ayaa sidoo kale kamid ah meelaha uu saameeyay 6.1 million oo kiis ayaa laga heley iyadoo France 2.2 million kiis uu ku dhacay.
Ku dhowaad 38.4 million oo qof ayaa ka bogsootay feyraska corona caalamka oo dhan.
In ka badan 100 jaad oo tallaal ah ayaa hadda maraya heerar kala duwan, shirakadda dawooyinka ee Mareykanka Pfizer iyo tan Jarmalka laga leeyahay ee BioNtech ayaa todobaadkii hore sheegay in 95% tallaalka uu wax tar yeeshay isla markaana ku wadaan dib u habeyn.
Hadalka shirakadaha ayaa imaanaya maalmo ka dib markii shirkadda Mareykanka Moderna ay sheegtay in si iskeeda ah u sameysay tallaal isla markaana lagu kalsoonaan karo 94.5%.
Dedaalka loogu jiro soo saarista tallaalka, wuxuu muujineyaa in dhammaadka COVID-19, sida uu sheegay agaasimaha hey’adda QM u qaabilsan caafimaadka WHO.
War-Murtiyeed Laga Soo Saaray Shirkii Midowga Musharixiinta Iyo Dowlada Oo La Hor Dhigay Dalabyo Culus
Madaxwayne Geele:- ” Waxaan Ka Cabsi Qabaa In Ay Soo Baxaan Baarlamaan Ay Si Dadban U Maamusho Al-Shabaab”
Gudoomiye Faysal Cali Waraabe Oo Booqday Abwaan Hadraawi Oo Burco Ku Xanuunsan
Abaar Daran Oo Aan Hore Loo Arag Oo Laga Soo Sheegayo Galbeedka Dalka Maraykanka
Bnnstaff Bnnstaff June 5, 2022
Muwaadin Soomaali Ah Oo u Geeriyooday Dhaawac Loogu Geystay Turkiga
Bnnstaff Bnnstaff December 13, 2021